Fifanakalozana mailaka sy zavatra novonoin'i Mistake. Esory ny mailaka ao amin'ny mailaka fifanakalozana.
Home Products DataNumen Exchange Recovery Fafao ireo zavatra fifanakalozam-bola avy amin'i Mistake
Fafao ireo zavatra mifanakalo amin'ny hadisoana? DataNumen Exchange Recovery afaka mamaha azy ireo!
Fafao ny mailaka sy zavatra ifanakalozana avy amin'i Mistake:
Raha mamafa mailaka na zavatra hafa ao amin'ny boaty mailaka Exchange ianao, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra "Del", dia hafindra mankany amin'ny folder "Item voafafa" izany. Azonao atao ny mamerina azy io amin'ny alàlan'ny fanovana tsotra izao amin'ny folder "Item voafafa", fitadiavana ny mailaka na zavatra tadiavinao, ary mamerina azy amin'ny toerana nisy azy na ireo lahatahiry mahazatra hafa.
Na izany aza, raha mamafa ny zavatra Exchange ianao araka ny voalaza ao anatin'ireto toe-javatra telo manaraka ireto dia voafafa maharitra izany:
Ianao na ny mpitantana dia mampiasa ny opéras-mamafa mamafa (Shift + Del) hamafana zavatra Exchange. Ny fandidiana famafana mafy dia mamela ny Exchange hamafa ilay zavatra nefa tsy mandefa izany any amin'ny fampirimana "Item voafafa" na ny cache voafafa amin'ny entana rehefa tsy azo atao ny fananana Cache.
Ianao na ny mpandrindra dia mamafa ny zavatra avy ao amin'ny fampirimana "Item voafafa".
Ny administratera dia mamafa tsy nahy ny boaty mailaka na ny mpizara Exchange aza rehefa mampiasa ny programa Microsoft Exchange Administrator. Amin'ny tranga toy izany dia hamafana maharitra ny boaty mailaka na mpizara avy amin'ny lahatahiry i Exchange.
Na dia voafafa maharitra aza ilay zavatra, mety mbola azonao atao ny mamerina azy io ny fampirimana ivelan'ny tsipika (.ost) rakitra mifanaraka amin'ny boaty mailaka Exchange, tahaka ny OST Ny rakitra dia tahadika ivelan'ny boaty mailaka ao amin'ny mpizara. Ary misy toe-javatra roa:
Tsy mbola natambatrao ilay OST rakitra miaraka amin'ny mpizara. Amin'izay dia mbola misy ilay zavatra voafafa tamin'ny mpizara ao amin'ny OST ataovy ara-dalàna.
Nampifanarahinao ny OST rakitra miaraka amin'ny mpizara. Amin'izay dia esorina ao amin'ilay ilay zavatra nesorina tamina mpizara OST hametraka.
Ho an'ny toe-javatra roa, azonao ampiasaina DataNumen Exchange Recovery hamerina ilay zavatra voafafa tao amin'ilay OST rakitra. Fa ho an'ny toe-javatra samihafa dia mety manantena ianao fa hahazo ilay zavatra tsy voafafa avy amin'ny toerana samihafa.
mampiasa DataNumen Exchange Recovery hanafoanana ireo zava-mahadomelina voafafa maharitra:
Azafady mba ataovy izao manaraka izao mba hahitanao ireo zavatra Exchange voafafa mandrakizay DataNumen Exchange Recovery:
Amin'ny solo-sainanao eo an-toerana dia tadiavo ny OST fisie mifanaraka amin'ny boaty mailaka Exchange izay tianao hamafana ireo zavatra. Azonao atao ny mamaritra ny toerana misy ny rakitra miorina amin'ny fananany aseho ao amin'ny Outlook. Na ampiasao ny Mitady miasa ao amin'ny Windows hikarohana azy. Na mikaroha amin'ny toerana efa voafaritra mialoha.
Akatona ny Outlook sy ny rindranasa hafa mety hiditra amin'ny OST hametraka.
Fanteno ny OST rakitra hita ao amin'ny dingana 1 ho loharano OST fisie ho sitrana.
Kitiho ny “Start sitrana ”bokotra hahazoana ny loharano OST hametraka. DataNumen Exchange Recovery dia hamaky sy hamerina ireo zavatra voafafa ao amin'ilay loharano OST rakitra, ary tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST vaovao izay voalaza ao amin'ny dingana 5 ny anarany.
Aorian'ny fizotry ny fanarenana dia azonao atao ny mampiasa Microsoft Outlook hanokatra ny rakitra PST efa voapetraka ary hahazo ireo zavatra tsy voafafa. Raha mbola tsy nampifanarahinao ny OST apetraho amin'ny mpizara, avy eo ianao dia afaka mahita ireo zavatra tsy voafafa ao amin'ny toerana nisy azy ireo. Na izany aza, raha efa nampifanarahinao ny OST rakitra, avy eo ianao dia afaka mahita ireo zavatra tsy voafafa ao amin'ireo toerana izay hamafana mandrakizay azy ireo. Ohatra, raha mampiasa ny bokotra "Shift + Del" ianao hamafana mandrakizay ny mailaka avy amin'ny folder "Inbox", dia DataNumen Exchange Recovery hamerina azy io amin'ny folder "Inbox" aorian'ny fizotrany. Raha mampiasa ny bokotra "Del" ianao hamafana ity mailaka ity avy amin'ny folder "Inbox", ary avy eo hamafa azy io hatrany amin'ny folder "Item voafafa", avy eo aorian'ny fanarenana, dia haverina amin'ny lafaoro "Item voafafa" izy io.
Fanamarihana: Mety hahita zavatra tsy voafafa ao amin'ny lahatahiry "Recovered_Groupxxx" ianao. Aza miraharaha azy ireo fotsiny azafady. Satria indraindray rehefa manala zavatra amin'ny boaty mailaka Exchange ianao ary mampifandray azy amin'ny OST rakitra, Outlook dia hanao kopia dika mitovy amin'ny fomba tsy misy dikany. DataNumen Exchange Recovery dia mahery vaika ka afaka mamerina ireo kopia voarohirohy ireo ihany koa ary mitondra azy ireo ho lost & entana hita, izay haverina ary apetraka ao anaty lahatahiry antsoina hoe "Recovered_Groupxxx" ao amin'ny rakitra PST efa raikitra